eHimalaya Online || News from nepal » सुन र चाँदीले भरिएको एक उल्का पृथ्वीको नजिक आउँदै ? एउटा सानो टुक्रा पनि अरबौं भन्दा धेरै मूल्यवान…
२०७८ साउन ३० गते शनिवार ०४:२७
एजेन्सी, नासाले एउटा नयाँ उल्कापिण्ड 'गोल्डमाइन एस्टेरोइड' पृथ्वीको नजिक आउने बारे जानकारी दिएको छ। यस उल्कापिण्डको विशेषता यो हो कि यो सुनको खानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि सुन मात्र होईन, तर यो उल्का धेरै अन्य कीमती...
एजेन्सी, नासाले एउटा नयाँ उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ पृथ्वीको नजिक आउने बारे जानकारी दिएको छ। यस उल्कापिण्डको विशेषता यो हो कि यो सुनको खानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि सुन मात्र होईन, तर यो उल्का धेरै अन्य कीमती धातुहरु (बहुमूल्य धातुहरु संग क्षुद्रग्रह पूर्ण) बाट भरिएको छ। यसको एक सानो टुक्रा को लागत अरबौं र ट्रिलियन भन्दा बढी भनिएको छ।
पृथ्वी बाहेक सौर्यमण्डलमा धेरै ग्रहहरु छन्। त्यस्तै, वर्षौंदेखि, वैज्ञानिकहरु कुनै एक ग्रह को लागी खोजिरहेका छन् जहाँ अक्सिजन र पानी को उपस्थिति को संभावना छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कुनै ग्रह पत्ता लागेको छैन। जे होस्, त्यहाँ अन्य ग्रहहरु को तुलना मा मंगल ग्रह मा जीवन को धेरै संभावनाहरु छन्। हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरु बाहेक उल्कापिण्डहरु पनि घुमिरहन्छन्। अब नासाले बताएको छ कि १२४ माईल चौडा उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ हाम्रो सौर्यमण्डलमा घुमिरहेको छ, जसको मूल्य अरबौं खरबौ भन्दा बढी छ। यो उल्का धेरै बहुमूल्य धातुहरु संग भरिएको छ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यस उल्कापिण्डमा धेरै बहुमूल्य धातुहरु भरिएका छन्। तिनीहरूको मूल्य लगभग १० हजार क्वाड्रिलियन डलर हो। त्यो हो, यसको एक सानो टुक्रा पनि अरबौं र ट्रिलियन मा खर्च हुनेछ। वैज्ञानिकहरुले यसलाई ‘Psyche 16 asteroid’ नाम दिएका छन्। यो १२४ माइल चौडा छ। यो उल्का सूर्य को वरिपरि घुम्दै मंगल र बृहस्पति को बीच मा अवस्थित छ। नासाले यो सुनले भरिएको उल्कापिण्डको लागी एउटा नयाँ मिशन शुरू गरेको छ, जस अन्तर्गत २०२६ सम्म यसको नजिक जाने कोसिस गरिनेछ।
‘Psyche 16 asteroid’ कुनै ग्रहको टुक्रिएको भाग मानिन्छ। यो योजना २०२६ मा यसको नजिक गएर अध्ययन गर्न को लागी बनाईएको छ। क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिकहरुको एउटा समूहले यसको तापक्रम पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेको छ ताकि यो अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ।
‘Psyche 16 asteroid’ पहिलो पटक सन् १८५२ मा पत्ता लागेको थियो। यो मानिन्छ कि यो सौर्यमण्डल को गठन को दौरान एक टक्कर मा ग्रह बाट अलग भएको थियो। तब देखि यो अन्तरिक्ष मा परिक्रमा गरी रहेको छ।
वैज्ञानिकहरु यस टुक्रा को बारे मा धेरै अनुमान लगाएका छन्। उनका अनुसार त्यहाँ धेरै बहुमूल्य धातुहरुको थुप्रो छ। यसमा सुन, चाँदी, फलाम र निकल सामेल छन्। यसको मूल्य अरबौं मा अनुमान गरिएको छ। नासाका वैज्ञानिकहरुका अनुसार चाँडै नै थाहा हुनेछ कि यो उल्का टुक्रा को स्रोत के हो? वर्तमान मा, ‘Psyche 16 asteroid’ पृथ्वी बाट २०० मिलियन माइल टाढा छ। तर २०२६ सम्म, यसको बारे मा अधिक जानकारी लिईनेछ।
प्रकाशित मिति २०७८ साउन ३० गते शनिवार ०४:२७